03/06/2019 lin htet 0
ဘယ်အစိုးရတက်တက် ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတာဆိုသူများဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက မိန့်ကြားထားတာလေး ဖတ်ကြည့်ပါ …. ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရ မယ်။ မဲသွားပေးစရာမလိုပါဘူး ဆိုတဲ့ သူတွေလည်းရှိတယ်။ သာ မန်အားဖြင့် ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဟုတ်သလို ထင်ရတာပေါ့နော် …။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရ မယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ခွဲခြမ်းကြည့် Continuous reading
လင်မယား ကွာရှင်းပြီး နှစ်ရက်အကြာတွင် ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူမှ ဓားဖြင့်ထိုး
လင်မယား ကွာရှင်းပြီး နှစ်ရက်အကြာတွင် ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူမှ ဓားဖြင့်ထိုး လင်မယား ကွာရှင်းပြီး နှစ်ရက်အကြာတွင် အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးအား ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူမှ ဓားဖြင့် ထိုးသတ်မှု ယနေ့ (ဇွန် ၃ ရက်) နံနက်ပိုင်းတွင် စစ်ကိုင်းမြို့မ ပျံကျဈေး၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း စစ်ကိုင်းမြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။ Continuous reading
ပဲခူးမြို့နန်းတော်ရာရပ်ကွက်အင်းဝင်၇လမ်းတွင်အသက်၁၁နှစ်အရွယ်ဆဠမတန်းကျောင်းသူအားသွေးဆောင်ခိုးယူမူ့ဖြစ်ပွား ပဲခူးမြို့ နန်းတော်ရာ ရပ်ကွက် အင်းဝင်၇လမ်း အမှတ်(၂၇၅၂) နေဦး လူခင်သည် ၂၈ ၅ ၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၅နာရီအချိန် အိပ်ရာမှ နိုးချိန်တွင် ဇနီးဖြင့် သူမှအုပ်ထိန်းမူ့ အောက်တွင် ရှိသော တစ်အိမ်ထဲ အတူနေ မြေးဖြစ်သူ မေမြတ်နိုးခင်အသက် ၁၁နှစ်သည် Continuous reading
ချစ်သူ ရည်းစား ထားတယ် ဆိုတာက တကယ်တော့ ကိုယ့်သိက္ခာနဲ့ အချစ်ကို အလဲအလှယ် လုပ်လိုက်တာပါပဲ …..
03/06/2019 Yan Naing 0
ချစ်သူ ရည်းစား ထားတယ် ဆိုတာက တကယ်တော့ ကိုယ့်သိက္ခာနဲ့ အချစ်ကို အလဲအလှယ် လုပ်လိုက်တာပါပဲ ….. “သိက္ခာ ရှိရှိ ချစ်ပါ ” ချစ်သူ ရည်းစားထားတယ်ဆိုတာက တကယ်တော့ ကိုယ့်သိက္ခာနဲ့အချစ်ကို အလဲအလှယ်လုပ်လိုက်ရတာပါပဲ …။ ချစ်သူ ရည်းစားထားတယ်ဆိုတာက ယောင်္ကျားလေး ဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေး Continuous reading
ကျိုင်းတုံမြို့မရဲစခန်းမှ သက်သေခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသည့် ICE မူးယစ်ဆေးဝါးများအား ကျောက်ချဉ်အစားထိုး သူအား ဖမ်းဆီးရမိ
ကျိုင်းတုံမြို့မရဲစခန်းမှ သက်သေခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသည့် ICE မူးယစ်ဆေးဝါးများအား ကျောက်ချဉ်အစားထိုး သူအား ဖမ်းဆီးရမိ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင် ကျိုင်းတုံမြို့မ ရဲစခန်းတွင် သက်သေခံ အဖြစ် သိမ်းဆည်း ထားရှိသော မူးယစ် ဆေးဝါးများ ထဲမှ ICE(၁)ကီလိုပါ အထုတ် (၆၂)ထုတ်အား တခြား ပုံစံတူ ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုး Continuous reading
မကြာခင် မှာ ၁၀တန်းအောင်စရင်း ထွက်တော့မှာ မို့လို့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များနှင့် မိဘများအား သိရှိစေရန် share ပေးကြပါ…
မကြာခင် မှာ ၁၀တန်းအောင်စရင်း ထွက်တော့မှာ မို့လို့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များနှင့် မိဘများအား သိရှိစေရန် share ပေးကြပါ… ၁၀ တန်း ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် မိဘများအား သိရှိစေရန် shareပေးကြပါ 🖤🖤🖤 မကြာခင်မှာ ၁၀ တန်း အောင်စရင်း တွေထွက်ပါ Continuous reading
အသက် ၁၁ နှစ် အရွယ် ဆဠမတန်း ကျောင်းသူအား သွေးဆောင် ခေါ်ယူသွားသူ
အသက် ၁၁ နှစ် အရွယ် ဆဠမတန်း ကျောင်းသူအား သွေးဆောင် ခေါ်ယူသွားသူ ပဲခူးမြို့ နန်းတော်ရာ ရပ်ကွက် အင်းဝ ၇ လမ်း တွင် အသက် ၁၁ နှစ် အရွယ် ဆဠမတန်း ကျောင်းသူအား သွေးဆောင် ခိုးယူမှု ဖြစ်ပွား ပဲခူးမြို့ Continuous reading
သင်ပျော်သော အလုပ်ကို လုပ်ပါ . . .သင်လုပ်တဲ့အလုပ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ
သင်ပျော်သော အလုပ်ကို လုပ်ပါ . . .သင်လုပ်တဲ့အလုပ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ လူတစ်ယောက်ဟာ သူလုပ်တဲ့ အလုပ်မှာ ပျော်နေတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလူဟာ အောင်မြင်တော့မှာ. . . ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အလုပ်မှာ လုပ်နေရသူဟာ အချိန်ကုန်လို့ ကုန်မှန်းတောင်မသိဘဲ အချိန်ကုန်မြန်တယ်လို့တောင် ထင်ရသလို . . . Continuous reading